Diyopost.com :: सुनसरीमा भिषण आगलागी, ६३ वटा घर जलेर नष्ट ! सुनसरीमा भिषण आगलागी, ६३ वटा घर जलेर नष्ट ! - Diyopost.com
सुनसरीमा भिषण आगलागी, ६३ वटा घर जलेर नष्ट !
४ चैत, इटहरी । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–११ इक्राही बस्तीमा शनिबार राति भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा रु ६० लाख बढीको क्षति भएको छ ।